विडारीले संसदमा सोधे : जनताले जान्न चाहे, सडकमा गाडी किन चलेनन् ? (भिडियो), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
विडारीले संसदमा सोधे : जनताले जान्न चाहे, सडकमा गाडी किन चलेनन् ? (भिडियो)
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सांसद सांसद रामनारायण विडारी आज गाडी किन बन्द भयो, विद्यार्थीहरु किन विद्यालय गएनन् भनेर प्रश्न गरेका छन्।
राष्ट्रिय सभाको बिहीवार बसेको बैठकमा बोल्दै सांसद विडारीले सवारी साधन, पसलहरु, विद्यालय नचलेको कारणबारे सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए। ‘त्यो गाडी किन बन्द भयो ? आज मोटर किन चलेनन् ?’ विडारीले संसदमा सोधे,‘आज प्रायजसो पसल किन बन्द भयो ? ’
सरकारी गाडी चढेर हिँड्नेले नदेखेपनि सोझो हिँड्नेले सबै कुरा प्रस्ट देखेको सांसद विडारीले बताए ।
‘सारा कर्मचारी हस्याङफस्याङ गर्दै दौडेर आइरहेका रहेछन् । सरकारी गाडी चढेर हिँड्नेले त नदेख्न सक्छ’ सांसद विडारीले भने,‘ सोझै हिँड्नेले त भयंकर कुरा देख्यो नि १ संविधान जारी भएपछि पहिपटक देखियो ।’